Warbixin Ku Saabsan Somalida Gobolka Maine
Portland – Maine. Gobolka Maine oo ku yaala cirifka bari ee waddanka Mareykanka wuxuu kamid yahay gobollada eey Somalidu ku soo badaneysay waayahan danbe. Markii ugu horeysa ee aan tagay, waxaan isweydiiyey: Tolow yaa markii ugu horeeysay soo sahmiyey in Somali eey halkan ku noolaan karto? Maine waa gobol yar oo aan sidaas uga dhex muuqan qaarad weynta Mareykanka, wallow uusan baaxad ahaan yareyn. Somali meesheey ku badataba dheef lagu sheegyee, Somalida Maine oo u badan qoysas wexeey helaan taageero dowladeed oo dhinac u ridda. Waxbarashada gobolkuna waa mid loogu xilan karo.
Waagii kowda bisha kowbaad ee sanadkan cusub waxaan kula kowsaday magaalda Portland ee gobolka Maine. Intii aananba meel kale ku leexan, waxaan ku hormaray xarunta Radio-ga WMPG ama Waaberi radio oo eey Somalidu saacado hawada ku leeyihiin. Radio-gani waxaa laga dhageystaa hirarka FM-ka iyo AM-kaba. Sidoo kale, marka uu hawada ku jiro waxaa lagala saanqaadi karaa lingaxdooda shabakada caalamiga ah ee Internetka oo cinwaankeedu yahay www.wmpg.org. Radio-gan waxaa iska leh Jaamacadda UMS ee Portland. Somalidu wexeey soo galaan maalin kasta oo khamiis ah, saacadda bariga Mareykanka markeey tahay 10:30 subaxnimo iyagoo muddo saacad iyo bar ah hawada buuxiya. Wariyaha Somaliyeed ee Radio-gaas, Mr. Saadaq Ayanle ayaa kamid ah Somalidii ugu horeysay ee soo daga Maine ku dhawaad 10 sano kahor. “Dhowr qoys ayaan ku daganeyn Maine markii aan nimid “ ayuu yiri, isagoo ku qiyaasay Somalida gobolku ineey hadda gaarayaa ilaa iyo 5000 (shan kun) amaba xitaa 6000 (Lix kun). Walow uusan tirakoob rasmi ah jirin, haddana Somalidu wexeey ku badan yihiin Portland iyo Lewiston oo ah labada magaalo ee gobolkaba ugu weyn. Mudada uu Radio-gani hawada ku jiro, wuxuu soo daayaa wararkii ugu danbeeyey ee Somalia iyo kuwa caalamkaba, iyagoo wariyayaashu eey si toos ah wararkaas uga soo daabacdaan bogagga Internet-yada Somalida. Maadaama eey yihiin kuwa si bilaash ah oo iskaa wax u qabsa ah wax ugu qabanaya umadooda, wexeey dhalinyaradani isku dayaan ineey sida ugu sahlan ku soo helaan wararkii ugu danbeeyey. Sidoo kale, waxaa raadiyaha ka baxa heeso Somali ah oo intii aan joogay eey soo dalbadeen dhageystayaasha Somaliyeed ee Maine oo aad moodo ineey si gaar ah ugu xiran yihiin raadiyahooda. Riwaayado iyo majaajilooyin ayaa iyana si taxane ah uga baxa radiyaha. Markii aan ka dhaqaaqay xarunta radiyaha waxeey dhagaheygu u bogayeen radio Somali ku hadlaya oo ka shidan gaarigii aan saarnaa. Intaas kaliya kuma ekaane, markii aan tagay gurigii aan u socdayna, isla idaacadii oo maqal kaliya ah ayaa ka dhawaaqeysay taleefishinka kanaaladiisa gudaha (local) ah! Maalintii aan tagay, waxaa Saadaq barnaamijka la daadihiniyey wiil dhalinyaro ah oo C/lahi Yare la yiraahdo oo maraan sidaas u fogeyn loo tababaray inuu howsha radiyaha qabto. Isla dhalinyaradan ayaa sidoo kale ka shaqeeya taleefishinka Somalida oo isna dhowr goor todobaadkiiba soo gala.
Sida uu Saadaq ii sheegay, sida caadada ahba, dhowr xafiis jaaliyadeed ayaa u furan Somalida tirada yar ee Maine. Nasiib xumo, hal jaaliyad oo Somalidu ku mideysan tahay kama jiro Maine, sida uusanba meel kale – inta aan ka warhayo – uga jirin. Qoysas-ka Somalida ah intooda badan wexeey ka soo guureen magaalada Atlanta ee gobolka Georgia, wexeeyna dowladda ka helaan taageero dhanka guryaha ah iyo waliba mid dhaqaale oo u badan kaararka cuntada lagu iibsado. Maine dhan hadii laga eego, waa meel la dhihi karo weey deggan tahay oo caruur korsi ku fiican, marka loo barbardhigo Minneapolis, Atlanta iyo Columbus oo kale. Falalka danbiyadu aad beey ugu yar yihiin guud ahaan gobolka, taas oo tub toosan u horseedi karta caruurta soo koreysa. Dhanka kale marka laga eego, Maine waa meel eey Somalidu qeyb ahaan joogitaankeeda usoo jihaadeen. Sanad kahor ayeey aheyd markii uu duqa magaalda Lewiston ee gobolka Maine uu lahaa Somalidu meelihii eey ka yimaadeen haku laabtaan. Iskaba daa ineey ka joogsadaane, tirakoob madax banaan ayaa tibaaxaya in Somalidu soo laba jibaarmeen tan iyo intii uu duqa magaalada Lewiston hadalkaas yiri. Todobaad kadib ayeey Somalida iyo ururo u dooda xuquuqda beni-aadamku u dabaal dagi doonaan sanad-guuradii koobaad ee dhacdadii Lewiston. La qabsi kaliya ma ahane, Somalidu dukaamo iyo makhaayado ayaa uga furan magaalda Portland ee Maine.
Dhanka waxbarashada, gobolku wuxuu leeyahay jaamacado iyo kuleejooyin tayo ahaan meel dhexaad ah. Ha yeeshee, wuxuu saacad iyo bar kaliya u jira ‘xarunta waxbarasha dunida’ oo ah magaalada Boston ee gobolka Massachuasats, halkaas oo inkabadan 300 oo jaamacadood eey ku xayn-daaban yihiin. Sida lawada ogyahay, Boston waxaa ku yaal jaamacadda dunida ugu qaalisan ee Hardvard iyo machadka dhanka tiknoolajiyada ugu heysta ee MIT loo yaqaan. Si kasta oo arrinku ahaadaba, Maine waxaan kula kulmay arday dhigata koleejooyin kala duwan. Qaarkood xitaa wexeey ii sheegaan ineey u dhaxaan koleejooyin magaalada Portland dhowr saacadood u jira.